Soo dejisan MX Player 1.7.40 – Vessoft
Soo dejisan MX Player
MX Player – ciyaaryahan caan u ciyaaro video in tayo sare leh. Habkaani wuxuu ku of MX Player waa taageero ka hardware iyo multi-core kelmadaha faylasha in bixisaa tayada video maqli karo. Software la shaqeeyaa ay qaabab caanka ah ee video files oo isticmaala codecs u gaar ah in loo maqli karo video. MX Player kuu ogolaanayaa inaad Customize shaqada la subtitles, gab ama dooran track maqal ah markii daawashada video oo ka baxaya oo shaashadda ka beddesho. MX Player sidoo kale waxaa ku jira tiro badan oo ah qalab reserved maamulka ee ciyaaryahanka.
Management of subtitles
Kor uqaadista screen
Block of screen
MX Player Software la xiriira:
Ciyaaryahan Media Tool in uu abaabulo files warbaahinta in kaydinta daruurtii. Software The kuu ogolaanayaa inaad waafajinta u helaan in ay faylasha ka qalab kala duwan.
العربية, English, Українська, Français... BS.Player 1.27.189
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka buuxda u ciyaaro files audio iyo video. Software ka kooban yahay go'an badan oo codecs si aad u eegto video qaabab badan oo waa wanaagsan, muusig ku ciyaaraan.
العربية, English, Українська, Français... VLC 0.9.10
العربية, English, Українська, Français... KMPlayer 1.6.2
Ciyaaryahan Media Mid ka mid ah ciyaartoyda ugu caansan inay ku ciyaaraan files warbaahinta. Software waxa uu leeyahay tiro balaadhan oo ah goobaha loogu talagalay loo maqli karo tayada tiro badan oo ah qaabab multimedia.
العربية, English, Українська, Français... AIMP 2.00.268
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahan awood leh oo ay taageertaa qaabab audio caan ah. Software ka kooban barbaraha multiband in astaysto tayada codka faylasha audio ah.
العربية, English, Українська, Français... PlayerPro 3.1
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka MFT oo taageertaa ugu qaabab warbaahinta. In codsiga waxaa jira qalabka ay u tags edit, dalban saamaynta audio adag iyo qaar badan.
العربية, English, Українська, Français... Music Player 2.8.2
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka music haboon la taageero ah qaabab loo jecel yahay. Software ka kooban barbaraha awood leh oo u ogolaanaya in ay fuliyaan raadinta deg deg ah files music.
العربية, English, Українська, Français... Equalizer + 2.5.3
Ciyaaryahan Media Ciyaaryahanka music Functional ka kooban 11 goobaha codka caadiga ah iyo 5 urur barbaraha kala duwan weyn ee mawjadaha.
Network Bulshada Codsiga free of shabakadda ugu caansan ee bulshada. Software ayaa awood u siineysaa inay u arkaan iyo in la abuuro content kala duwan taas oo ku sugan shabakada bulshada.
العربية, English, Français, Español... Remote Mouse 2801
Helitaanka Remote Phone software ah ee ay gacanta ku fog of computer by hab of smartphone. software waa ay awoodaan in ay si buuxda u jilo hawlaha mouse iyo keyboard.
العربية, English, Français, Español... TuneIn Radio 14.7.13402
Ayna System Intaa waxaa dheer weyn si ay u siiyaan howlgalka haboon, ammaan iyo qalab degdeg ah. Software waxa ka mid ah qalab badan si loo gaaro qaab ugu weyn ee suuragalka ah.
العربية, English, Français, Español... Gmail 5.7.1
E-mail Codsiga in ay la shaqeeyaan email ka adeega Google. Software waxay ka talisaa mail la xisaab badan oo gaadmada ah shakhsi.
العربية, English, Українська, Français... Mindomo 3.0.15
qabanqaabiyayaasha software ah in arki fikradaha kala duwan oo la qorsheeyo fulinta hawlaha qaab macquul ah, geed, iyo tallaabooyin kale.
Imtixaanka Codsiga waxaa soo bandhigaan macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda ka mid ah qalabka. User waxay leedahay fursad ay ku arkaan xogta xasuusta, processor, heerkulka iyo qaybaha kale ee nidaamka.